Umphathi wezemidlalo, ukuqeqesha ezemidlalo ngesikhathi semfundo yesikhathi esithile
Ubenza babe nemidlalo
Ukuqeqeshwa okuhlobene nezemidlalo kuphela ku-BSO (imfundo ephakeme yezemfundo).
Ayikho imidlalo ephezulu, kodwa izithombe zezemidlalo
Njengomqeqeshi wemidlalo uzosiza uthisha noma umqeqeshi ekuhambeni nabagijimi bezokuzilibazisa. Uhlinzeka ukwesekwa kokusebenza nokusiza ukuqinisekisa ukuphepha nenhlalakahle yomdlali. Njengomqeqeshi wezemidlalo usebenza ngokuzimela, ngokuphepha nangendlela enomthwalo wemidlalo. Usebenza ngaphansi kokuqondisa okuqondile noma okungaqondile futhi ngokuya komyalelo womuntu onomthwalo wemfanelo.
Kumele ukwazi ukusebenzelana kahle nabantu ikakhulukazi nezingane kanye nabantu abasha. Usebenza emvelweni wezemidlalo ngakho kubalulekile ukuthi wena ngokwakho ufanele futhi usebenzise imidlalo. Bobabili abagijimi abaphezulu nabadlali bezokuzilibazisa bayamukelekile ekuqeqesheni. Ukugxila ekuqondiseni abanye hhayi ezemidlalo. Siyaqinisekisa ukuthi ujwayele yonke imidlalo okufanele ufundise abanye.
I-Spectrumschool ine-infrastructure enkulu yezemidlalo kokubili esizindeni sethu nasezindaweni ezizungezile. Lokho kuyinzuzo enkulu esikoleni sethu.
Ithiphu ... Futhi hlola i-eesn yokuqeqeshwa kwezemidlalo ku-TSO funda + wazi kangcono.
Futhi lo mdlalo
Esikhathini sohlelo lokuqeqesha, kugxila ekuqondeni abanye abagijimi. Sizokufundisa imidlalo; Uyazi imithetho futhi ungabadlali abagijimi. Umsebenzi wakho wezemidlalo ungaphansi kokuqondiswa kwabanye.
Ukuqeqeshwa umqeqeshi wezemidlalo kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemibili.
Ngesitifiketi se umqeqeshi wezemidlalo Ungakwazi yini ukuqalisa nabomasipala nabaphathi bezingqalasizinda zezemidlalo.
Ukuqeqeshwa kuyilungiselelo elihle linye umsebenzi wokuphepha.
Awudingi ulwazi oluthile olukhethekile lwe-Training Supervisor Training course.
Yini umqeqeshi wezemidlalo okufanelekile?